‘दिमागका विकार तत्व फाल्न किताव पढ्नुपर्छ’ – Tandav News
‘दिमागका विकार तत्व फाल्न किताव पढ्नुपर्छ’
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७५ जेष्ठ ७ गते सोमबार १२:४२ मा प्रकाशित
ओम विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बुद्धि मल्ल पुस्तक अध्ययन र फुटकर लेखहरु प्रशस्त लेख्ने गर्छन् । उनै मल्लसँग ताण्डव साप्ताहिकले गरेको पुस्तक संवादको अंश :
सामान्यतय म आफू बैंकिङ्ग क्षेत्रमा संलग्न भएको हुनाले बैंकिङ्ग क्षेत्र तथा लिडरसिप सम्बन्धित पुस्तकहरु पढ्न मन पराउँछु तर, यसको साथै कहिलेकाँही समसामायिक राजनीति बिषयबस्तुका कितावहरु पनि पढ्न मन पर्छ ।
अहिले मैले पढ्दै गरेको पुस्तक नरम्यान भिन्सेन्ट पिलको ‘अ गाईड टु कन्फिडेन्ट लिभिङ्ग’ र ग्यारी केलर र जय पापासनको ‘द वान थिङ्ग’ हो ।
जसरी जुत्ताको लागि पालिस महत्व छ, जीवनमा पनि पुस्तक पढ्नु पनि त्यत्तीकै महत्व हुन्छ ।
तपाईलाई मन परेको पुस्तक ?
मलाई मनपरेको अंग्रेजी पुस्तकहरुमा द पावर अफ पोजिटिम थिंकिङ्ग, थिंक एण्ड ग्रो रिच आदी हुन भने नेपाली पुस्तकहरुमा जीवन काँडा कि फूल र रुक्माङ्गगद कटुवालको जिवनी आदी हुन् ।
मन नपरेको पुस्तक पनि होला नि ?
पुस्तक किन्दा म प्राय छानेर नै किन्छु । म के विश्वास राख्छु भने पुस्तकबाट पुस्तकमा भएका सबै पानाहरुमा आफूलाई मनपर्ने कुराहरु हुँदैनन् मलाई कुन पानाको कुन चिज मनपर्छ, त्यसैलाई नै ग्रहण गर्छु ।
मैले उपहार दिँदा उपहार दिने व्यक्तिलाई आवश्यक भएको गुणसम्बन्धी पुस्तक उपहार दिने गर्छु । जस्तै कुनै व्यक्तिलाई भाषण गर्न असहज छ भने पब्लिक स्पिकिङ्ग सम्बन्धी किताब उपहार दिन्छु ।
नेपालका उत्कृष्ट ५ लेखक को—को लाग्छन् तपाईंलाई ?
मन परेका नेपाली लेखकहरुमा बिश्वेश्वर कोईराला, कर्ण शाक्य, डा. योगी विकासानन्द, रोहित भण्डारी र सुधिर शर्मा हुन् ।
तपाईंको आयको कति खर्च किताबका निम्ति गर्नुहुन्छ ?
आयको यति नै प्रतिशत किताबमा खर्च गर्छु भनेर प्रतिशतमा नै गणना गर्दा त न्यून प्रतिशत नै आउला । तर प्रत्येक महिना कुनै न कुनै किताब खरिद गर्ने बानी बसालेको छु भने दशै, तिहार, नयाँ बर्षमा र बाहिर कुनै पनि ठाउँमा जाँदा ठुलो मात्रामा खरिद गर्ने गरेको छु ।
केटाकेटी हुँदा घरमा कस्ता किताब थिए ?
केटाकेटी हुँदा कहिलेकाँही दाईले ल्याउनुभएको राजनीति सम्बन्धी कितावहरु पढ्थें ।
नयाँ पुस्तालाई किताबतिर कसरी तान्ने ?
जसरी कम्प्युटरका भाईरस फाल्नको लागि एण्टिभाईरस अपडेट गर्नुपर्छ, त्यसरी दिमागमा भएका अनावश्यक बिकार तत्वहरुलाई फाल्न किताव पढ्नु जरुरी हुन्छ । किताबमा गरिएको लगानी संसारको सबैभन्दा राम्रो लगानी हो ।
नो मोर सिन्डिकेट : यातायात मन्त्रालय र व्यवसायीबीच पाँचबुँदे सहमति